Ikhaya STARS E-EUROPE I-Andros Townsend Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Ye-Football Genius eyaziwa yisiteketiso; "Down Town". Indaba yethu ye-Andros Townsend yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumo, impilo yomndeni, inhlekelele yomndeni kanye namanye amaqiniso angacacile (angaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngomlando wakhe obuhlungu noTottenham. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abazi okuningi mayelana ne-Andros Townsend's Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
I-Andros Townsend Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
U -Andros Darryl Townsend wazalwa ngosuku lwe-16th kaJulayi 1991 eLietonstone, endaweni engaphansi kwedolobha laseLondon lapho kungekho lutho oluphela lapho kunebhola ezinyaweni zomuntu wonke.
Indaba yezingane ze-Andros Townsend enye yezinsizi ezixhuma ekuhluphekeni komndeni wakhe nokuzimisela ukuphumelela. Uma kungeyona into engavamile, kuyindaba yendoda encane nehlakaniphile ephuphayo eyabusiswa ngethalenta elingavamile.
U-Townsend wazalelwa unina, u-Katerina Erodotou wezingane zesiGreki zaseCypriot kanye nobaba, uTroy Townsend waseJamican. Njengoba ekhula, waya eRush Croft Sports College eyamnika ithuba lokudlala ibhola lezemidlalo ngesikhathi sokudlala.
Labo ababeyazi iCorthendend njengomfana bekhuluma ngomlingiswa ozimisele ukuthi abe nesifiso esivuthayo sokuphumelela. Kusukela esemncane, kwacaca u-Andros wayenethalente edingekayo futhi ehamba phambili, kodwa umsebenzi wakhe omncane wawubuye ubeke izisombululo zobuchwepheshe nezomuntu siqu.
Ngesikhathi i-Townsend yayingu-10, umfowabo omdala uKurtis - owayeyi-18 - washonela ekushayweni kwemoto ngesikhathi edlala ukudlala umdlalo weCheshunt FC.Ubuciko ngezansi isithombe sikaKurtis.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi ukuqeqeshwa kwebhola laseDolobheni likaDownsend kwaqala kusukela esemncane futhi kwaqondiswa ngenye indlela ubaba wakhe kanye nomfowabo omkhulu uJortis owayengumzali wakhe wokuqala owaba ngowokuqala kukaMaria.
U-Kurtis ushonele e-18 engozini yemoto ngoDisemba 15, 2001, ngenkathi eqhutshwa nabadlali abathathu emdlalweni weCheshunt FC, ohlangothini lukaTroy owakhona ngaleso sikhathi. Ngeshwa emndenini, nguye kuphela owafa engozini nakuba ehlezi esihlalweni sangemuva.
I-Andros Townsend Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
I-Hale End Sportsground eyakhiwe i-Andros Townsend. Kwakubonakala kalula kusuka efasiteleni lendlu ehlelwe kahle. Kwakukhona kule nkundla ukuthi i-Andros encane idlale ngemuva kwesikole nabangani bakhe. NgoMgqibelo ekuseni wayezofunda izifundo zesiGreki esikoleni sakhe, iRush Croft Sports College, ngesikhathi kunina.
Ngemva kokuphothula iziqu, u-Andros ubaba wabhalisa indodana yakhe ukudlala i-Ridgeway Rovers njengomfana. Leli yiqembu elifanayo Beckham futhi Harry Kane idlalwe. Uze wadlala ngokumelene neqembu elisha lomlingani Jonjo Shelvey, owayekuCharlton lapho bobabili bebancane.
U-Andros Townsend waba yilungu leqembu le-Spurs ngesikhathi eseneminyaka eyishumi nambili. Ngeshwa, ekukhululweni kwe-15 wakhululwa. Ngibonga uNkulunkulu, wabuyiselwa emuva kwezinsuku ezimbili nje lapho abaqeqeshi bakhe bashayelwa khona futhi abasha bamkhumbula.
Ukulandela umugqa ngomqeqeshi wempilo uNathan Gardiner kanye I-Poch, I-Townsend yabalekela eNewcastle futhi kamuva yaya eCrystal Palace. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Andros Townsend Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Futhi ngemuva kwawo wonke ama-footballer e-England, kunomfazi othakazelisayo noma intombi. Ubuhlobo phakathi kukaAndros Townsend noHazel O'Sullivan babathatha isimo bestie othandweni lweqiniso.
Intombi yaseKapasend uHazel yazalwa ngo-18th kaDisemba 1988 eDublin, Republic of Ireland kubazali u-Audrey O'Sullivan (umama), uJim O'Sullivan (ubaba). Uneminyaka engu-3 emdala kunendoda yakhe. Kusukela ehlobo lika-2013, u-Hazel O'Sullivan uye waziwa kakhulu eNgilandi ngoba wahlanganyela engosini yesiNgisi yeBig Brother.
Ngaphambi kweDolobhasend befika esithombeni, u-O'Sullivan waba nobuhlobo noFergus McFadden kuze kufike ehlobo lika-2013. Ngaphambi kwalokho, naye waba nobuhlobo no-ex-boxer UDarren Sutherland ngaphambi kokuba aqhubeke no-Andros Townsend.
UHazel O'Sullivan ngumuntu owake wacabanga ukuthi iMenenja yeBhola yenziwe ngempela. Umlingani we-Andros Townsend u-Hazel O'Sullivan utshele umlingani wakhe ukuthi uzohlawuliswa ngokungaqeqeshi futhi angatshele ngoLwesihlanu, kuphela uma ezwa ukuthi lesi sigameko senzeke kuMenenja weBhola njengoba kuchazwe ngezansi.
I-Andros Townsend Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Imininingwane yomndeni
I-Townsend idonsa ifa lobubaba e-Jamaica namagugu omama aseKhupro. Ngaphambi kokushona kukaKurtis umfowabo omdala, u -Andros uye waxhaswa zonke izinyathelo zikayise, uTroy.
Ubaba: Inkumbulo yebhola leTroy enhle yesikhundla seNdodana yakhe kuze kube manje futhi ibheke indodana yakhe ihola umgomo wayo wokuqala weNkulumbuso.
Umndeni wakwa Andros Townsend uhlangabezane nezikhathi ezinzima kakhulu lapho kubonakala sengathi ukuphela kukaAndros kufana nokudumazeka okwalandela ubaba owayekade ehlaziya eCristal Palace ngesikhathi esifanayo uTeddy Sheringham. Umgwaqo wokuqashelwa wawungumdala owodwa kakhulu weDolobha laseJordane. Wathunyelwa ngeToktenham ngemali engaphansi kwama-9 eminyakeni emine. Lokhu kuletha inkumbulo enzima okunjalo kayihlo, eyamenza futhi mhlawumbe yakha izindawo eziningi ezinzima.
Lapho uTroy Townsend edlala izinsuku zakhe waba yize, waqala ukuqonda ukuqeqeshwa. Ube ngumphathi weChesham United eBuckinghamshire, lapho abaningi bemkhumbula khona ngokufika ngonyaka owodwa, ngaphambi nje kukaKhisimusi, lapho iqembu liphethe amaphuzu ayisishiyagalolunye ebhodini, futhi libabona bebalekela endaweni yokuxoshwa - kuphela ukwehlisa i-ligue ngenxa yezimali ukungalungi ngendlela engaphezu kokulawula kwakhe.
Yilapho indodana yakhe iqala ukusebenza kulo mdlalo kangangokuthi wanquma ukuthi kuzodingeka ashiye bonke abaphathi ngemuva kokuchitha isikhathi esiningi ekusizeni.
Ukukhathazeka okukhulu kukaTroy Townsend kungokwakhe kunoma yimuphi ubaba njengoba ezwa ukuthi akenzanga okwanele ukusiza indodana yakhe ukuba ibaluleke kakhulu njengoHarry Kane.
Umama: U-Katerina Erodotou unina we-Andros Townsend ohlangothini unalo ifa leCypriot neGrisi. Ungunina wamaRate uLate noNadine. Indodakazi yakhe okuthiwa nguNadine yazalwa ngosuku olufanayo (ngo-Agasti, 28th) njengomfowabo osekupheleni, uKurtis. Emndenini kaAndros Townsend, injabulo minyaka yonke ihlushwa ukudabuka ngosuku lokuzalwa kukaNadine. Umndeni usanda kugubha iminyaka engu-10th kaKurtis yokufa kwakhe.
I-Andros Townsend Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Umculo
I-Townsend yaqoshwa ngokucula ingoma Stand By Me by UBen E. King kanye nabanye abadlali abasha baseTottenham egumbini lokugqoka, okwaba yividiyo evelele ye-intanethi.
I-intanethi yaqala ukugubha ngenxa yedolobha laseMortsend abaningi ababecabanga ukuthi uhlanganyela inqwaba yenyama kanye nomfowabo omlingo womlingo owafika phezu kwe-intanethi eminyakeni embalwa eyedlule.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Andros Townsend yobuntwana kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.